गाँजा नै देशको वैकल्पिक विकासको आधार ! – Himalitimes
गाँजा नै देशको वैकल्पिक विकासको आधार !
२०७७ कार्तिक २४ १०:०७ मा प्रकाशित
महेन्द्र जङ्ग शाही
गाँजा नै देशको वैकल्पिक विकासको एउटा् बलियो आधारका रूपमा रहेको एक बनस्पति हो । जुन पूर्वीय सभ्यातामा पुर्खौदेखि औषधी र तरकारिको रुपमा प्रयोग हुँदै आइरहेको छ र यसलाइ धार्मिक हिसाबले हेर्ने हो भने पनि शिवजीको प्रसादका रुपमा लिइन्छ । तर हामीले गाँजालाई लागू औषध भनेर मात्र चिनेका छौ । बास्तबमा भन्ने हो भने गाँजा लागू औसध होइन , यो एउटा बनस्पति हो जुन हरेक घरमा अति आबस्यक पर्छ । हामी गाँजालाइ लागू औषधको सुचिमा राख्ने सन्धिमा बाधिएका छौ । तर यो सन्धी हाम्रो जस्तो अल्पबिकसित देशको लागि त्यति उपयुक्त होइन किन भने अमेरिका ,क्यानडा ,ओसियाना , होल्याण्ड लगायत युरोपेली धेरै देशहरुमा गाँजालाई कानूनी मान्यता दिइएकोछ छ । अमेरिकाकै दबाबमा आएर गाँजालाई गैरकनूनी बनाइएको हाम्रो देशमा गाजालाइ कनूनी मान्यता किन नदिने ?
नेपालमा सर्बप्रथम लागू औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले गाँजालाई निषेध गरेको छ । र यस ऐनले गाँजासहित भाङ ,चरेस तथा जुनसुकै बोबिरुवाटबाट चोप आउँछ त्यसलाइ लागू औसध किटान गरेको छ । यो ऐन विशेष गरि (सीआईए)को आदेशमा बनाइएको हो ,जसको मुल उदेश्य नेपालमामा भएको बहुमुल्य बनस्पति गाँजालाइ गैरकानूनी गर्ने , नेपालमा हुने गाँजा ब्यबसायलाई रोक लगाउने र जुन रुपमा आर्थिक बिकास भएको छ त्यसलाइ न्यून गराउनु हो । नेपाल सिङगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१ को हस्ताक्षरकर्ता मुलुक हो । नार्कोटिक कन्ट्रोल बोर्डले पनि गाँजालाई हिरोइन जस्तै मानेको छ । र नार्कोटिक सन्धिमा दुइथरि हस्ताक्षरकर्ता छ्न ।
एउटा सबै सर्त नमान्ने वा औषधि बनाउन छुट हस्ताक्षरकर्ता र छ भने हाम्रो अल्पबिकसित देश नेपाल सहितले सबै सर्त कबूल गरेका छन । तर अहिले नेपाल जस्तै अन्य हस्ताक्षरकर्ता देश हरुले यसलाई बैधानिकता दिइसकेका छन र यस्लाई लागू औषध मान्दैन पनि ।, तर त्यही गाँजा हाम्रो मुलुकमा लागू औषध हुने किन ? के हाम्रो देश अमेरिका ,अस्ट्रेलिया ,ओसियाना , होल्याण्ड लगायत यूरोपियन देशहरु भन्दा सप्पन्न शक्तिसाली राष्ट्र भएको होत ? यसरी हेर्ने हो भने हाम्रो देश अरु मित्र राष्ट्र भन्दा ज्यादै न्यून छ । त्यसैले देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक स्थितिलाइ सुधार्ने हो भने नेपालमा गाँजा खेतीलाई कनूनी मान्यता दिन जजुरी छ ।
नेपालमा अहिले गाँजा खेती लुकिछिपी भइरहेको छ र बिक्रि बितरण पनि गैरकानूनी भइरहेको छ, जसकारण धेरै नेपाली हरुले कष्टकर जेल जीवन बिताउनु परेको छ । यदि गाँजालाई बैधानिकता दिने हो भने नत नेपालीले जेल नै बस्नु पर्छ नत आर्थिक सङ्कट नै ब्यहोर्नुपर्छ । सुखी नेपाली , समृद नेपाल त्यसै हुदैन । त्यसो हुनलाई आफ्नो देशमा भएको साधनस्रोतलाई बढी भन्दा बढी चलाएमान बनाउनु पर्छ । खेती जुन ठाँउमा जे हावापानी सुहाउछ त्यही अनुसार नै गर्न जानुपर्छ र सिक्नुपर्छ । जुन ठाँउमा धान ,गहुँ ,मकै लगाएर आफ्नो आधरभुत आबस्यकता पूरा हुदैनन त्यहा त्यो खेती लगाएर कुनै औचित्य हुदैन । यदि त्यो ठाँउमा गाँजा खेती गरेर आम जनताको जिबनस्थरमा सुधार आउँछ भने त्यस्लाइ किन रोक लगाउने भन्ने जिज्ञासा हो ।
सदियौदेखि गाँजालाई औषधिको रुपमा लिएका छन र गाँजालाइ आयुबेर्दल्र पनि स्वीकार गरेको छ । गाँजा लागू औषध नभएर बहुमुल्य औषधि हो भन्ने कुरामा कुनै दुई मत नै छैन किन भने गाँजाले स्वास्थमा आउने विभिन्न समस्या जस्तै मुर्छा पर्ने, अनिन्द्रा,अल्जाइमर्स, शरीरिक पिडा ग्लाउकोमा भनिने अँखारोग आदि रोगको उपचारमा सहयोगी हुने कुरा अनुसन्धानले बताउछ ।
बिरामी लठ्याउन वा पिडा कम गर्न अहिले जस्तो एनाल्जेसिक औषधि नहुदा सयौं बर्षदेखि गाँजा प्रयोग हुँदै आएको थियो । शरीरमा क्यान्सर फैलाउने कोष मार्न र रक्सी तथा अन्य हानिकरक लागुऔसधको लत छुट्टाउन गाँजा नै उपयुक्त हुने अनुसन्धानले बताउछ । बैज्ञानिकले पुष्टि गरेका यी कुरा हरु आर्युबेदका लागि नौलो होइन ।
होल्याण्डको सबै भन्दा चर्चित weed cafe मा सबैभन्दा महङ्गो गाँजा नेपाल को हो जस्लाइ बुदर्स आइ भनिन्छ । त्यो गाँजा नेपालबाट गैरकानूनी रुपमा निर्यात भएको छ । जस्को फाइदा किसानले नभएर अरुले लगिरहेका छ्न । यदि गाँजालाई कानूनी मान्यता दिने हो भने त्यो गाँजा सिधै स्वत स्फुर्त रुपमा किसानले बिक्री बितरण गर्न पाउँछन् जस्ले गर्दा भएको अम्दानी किसान को पोल्टोमा पर्न जान्छ । राष्ट्र शक्तिसाली र सम्पन्न हुनलाई ब्यक्ति धनी हुन अवस्यक छ र जुन देशहरु धनी छन ती देश हरुले कि त औद्योगिक क्रान्ती गरेका छन कि कृषि क्रान्ती । जस्ले गर्दा किसानहरुलाइ केही राहत पाइएको छ । हाम्रो देशमा भने किसान हरुले हात मुख धोएर बस्नु पर्ने अवस्था छ ।
किसानले गरेको उत्पदनले किसानलाई नै खान पुगिरहेको छैन । यो समस्याले किसानहरु चपेटामा परेका छन । जसको फलस्वरूप हाम्रो देशमा भएको जनशक्ति वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएका छ्न । तेसैले ब्यक्ती , समाज र राष्ट्रलाई धनी भएको हेर्न चाहने हो भने गाँजालाई कानूनी मान्यता दिनु पर्छ र राष्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय रुपमा आयात तथा निर्यात गर्न पाउनु पर्छ । र राष्ट्रलाई सम्पन्नसाली बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । तर यसको मतलब सबै व्यक्तिले गाँजा नै सेवन गर्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन ।
हामी कहाँ चुरोट र रक्सी सेवन गर्न समन्य मनिन्छ तर गाँजा सेवन गर्नु अपराध मनिन्छ । अनुसन्धान र अध्ययनले चुरोट र रक्सीको तुलनामा गाजा एकदम कम हनिकरक भएको जानकरी गराउदछ । जबदेखि मानिसलाई गाँजा बारे थाहा भयो तबदेखि यसको प्रयोग र ओभर डोज भएर कसैको पनि ज्यान गएको छैन । यसले स्वास्थमा कुनै पनि असर पार्दैन भन्न खोजिएको हैन तर रक्सी र धुवाँ जन्य पदार्थ भन्दा कम असर गर्छ भन्ने धारणा हो । गाँजालाइ अनावश्यक प्रयोग होस भनेर खुला गर्नुपर्छ भनिएको हैन । यसबाट हुने अनगिन्ती फाइदा लिनको लागि यसलाई बैधानिकता दिनुपर्छ भनिएको हो । हामिले यसबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिन सक्नुपर्छ । सरसर्ती हेर्ने हो भने गाँजा सेवन बाट अहिलेसम्म कसैले ज्यान गुमाउनु परेको छैन र कुनै सामाजिक आपराध पनि भएको छैन भन्ने कुरा अध्ययन अनुसन्धानले बताउँछ ।
तर रक्सिको सेवनबाट सामजमा हुने विभिन्न अपराधीक क्रियाकलापहरु हुने गर्दछ्न । जस्तै बलात्कार, कुटपिट , हत्याहिंसा आदि । त्यस्तै चुरोटले पुर्याउने क्षती बारे पनि हामी अलि अलि भए पनि अबगत नै छौ । अध्ययन अनुसार हरेक साल ६ मिलियन मानिसहरुले चुरोट सेवन ले गर्दा ज्यान गुमाएका छ्न । तेस्तै रक्सिको सेवनले अहिलेसम्म तीसलाख मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको अध्ययनले बताउछ । तर गाँजाको सेवनबाट अहिलेसम्म कसैको ज्यान गएको छैन । यहाँ त मानिसहरु बिबाह , बर्तबन्धमा खुलेआम शानका साथ प्रयोग गर्ने गर्दछ्न ।
स्वास्थमा पर्ने क्षतिहेर्ने हो भने रक्सी र चुरोट भन्दा कम हानिकरक देखिन्छ । मानिसहरुलाइ रक्सी चुरोट भन्दा गाँजा हनिकारक हो भन्ने भ्रम भइरहेको छ । यो सोचाइ जबसम्म परिवर्तन हुदैन तबसम्म देशको आर्थिक सुधारमा कुनै फट्को मार्न सकिँदैन भन्ने कुरा पनि तथस्ट छ । गाँजालाई धूम्रपानको रुपमा कडाइ गर्दै जने र अन्य प्रयोजनका रुपमा प्रयोग गर्ने हो भने देशले धेरै आय आर्जन गर्न सकिने सम्बाभना देखिन्छ । जस्ले गर्दा बेरोजगार मेट्ने काम गर्द्छ ।
गाँजा प्रकृतिको एउटा अनुपम उपहार हो भन्दा पनि खासै फरक पर्दैन । बिस्वमा गाजाको उत्पादन परापुर्बकाल देखिनै नेपाल बाट भएको देखिन्छ र नेपालको गाँजा नै सबैभन्दा उत्कृष्ट गाँजा हो भन्ने पनि अनुसन्धानले बताउछ । नेपालमा जस्तो गाँजाको लागि प्राकृतिक बाताबरण अरु कुनै देशमा उपउक्त देखिदैन । तेसैले गाँजालाइ बैधानिकता दिनु नै हाम्रो जस्तो गरिब देशको लागि टेवा पुर्याउनु हो । यदि हामिले प्रकृतिको उत्पादनलाई लत्याउन खोज्यौ भने त्यसपछि नोक्सानीको सामाना गर्नु पर्ने कुरा निश्चित छ । त्यसैले आफ्नो देशमा भएको प्राकृतिक साधनस्रोतको प्रयोग गरौ । यसलाइ खेर जन नदेउ । आम नगरिक र राष्ट्रलाई धनी बनाउ ।
(लेखक शाही मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेत स्कुल अफ ल मा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन ।)
नागरिक सरकार गठनका लागि अघि सर
नेपालको जनसंख्या तीन करोड हुने प्रारम्भिक अनुमान